Hay’adaha ku shaqada leh dib-u-eegista Dastuurka oo wadatashi la yeeshay bulshada Jowhar – Radio Daljir
Hay’adaha ku shaqada leh dib-u-eegista Dastuurka oo wadatashi la yeeshay bulshada Jowhar
Janaayo 31, 2018 8:18 b 0
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Gudigga Baarlamaanka Federaalka ee La-sacodka dib-u-eegista Dastuurka iyo Gudigga Madaxbanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa kulan wadatshi ah la yeeshay Ururada Bulshada Rayidka ee magaalada Jowhar ee caasimadda Dawlad Goboleedka Hirshabeelle.
Kulanka oo ujeeddadiisu ahayd in bulshada Jowhar ay talooyinkooda ka dhiibtaan Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno badan oo kamid ah Ururada Bulshada Rayidka ee Hirshabeelle.
Sen Cabdiqaybdiid iyo Avv Maxamed Caballa oo kala ah labada Gudoomiye ee Guddiyada Baarlamaanka iyo Gudigga Madaxabanaan ayaa sheegeen in kulankan uu bilow u yahay kulmo kale oo ka dhici doona dhamaan degmooyinka dalka, sidoo kale waxa ay sheegeen in ay cadeeyneyso wadashaqeynta wanaagsan ee ka dhaxeeysa Wasaaradda iyo labada Guddi.
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay in Wasaaradda iyo labada Guddi ay ka go’antahay in ay dhageystaan talooyinka dadka Soomaaliyeed.
“Markii hore ee aan sameeyneynay Dastuurkan Qabyo-qoraalka ah ee sanadkii 2011kii lama imaan karin oo wadatashi laguma qaban karin magaalooyin badan oo dalka kamid ahaa maadaama ay arggagixisadu heysteen, sidaa awgeed hadda waxaa inaga go’an in Geedi-socodka Dib-u-eegista Dastuurka la gaarsiiyo dhaamaan gobolada oo waqti xaadirkan arggagixisada laga sii dabargoynayo” ayuu yiri Wasiirka.
Ugu dambayn, dadkii ka soo qaybgalay kulanka ayaa ra’ygooda la wadaagay Wasaaradda iyo labada Guddi.
Boosaaso laga furay Xarun Gabdhaha Cuno karinta lagu baro & Qurxinta (dhegayso+Sawiro)
Madaxweynaha Jubaland oo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda sare